१० करोड भ्रष्टाचारका आरोपी गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा छोडियो ! – Halkhabar kura
३० असार २०७८, बुधबार १९:४९
१० करोड भ्रष्टाचारका आरोपी गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा छोडियो !
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तानिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार १० लाख धरौटीमा छुटेका छन् । उनलाई विशेष अदालत काठमाडौँले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
Previous बालकोट घरको बार्दलीबाट ओलीको उद्घोष : माधव नेपाल ग’द्दार हुन्, क्षमा गर्न सकिँदैन (भिडियोसहित)
Next सांसदले नै ‘सिंगल सिंगल आइज’ भन्दै टेबल बजारेपछि गण्डकी प्रदेशसभामा यस्तो भयो